Aragtida Maamulka Man City Iyo Qaabka Ay Ciyaartoydooda Muhiimka Ah Kaga Ceshan Karaan Kooxaha Waa Wayn Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Aragtida Maamulka Man City Iyo Qaabka Ay Ciyaartoydooda Muhiimka Ah Kaga Ceshan Karaan Kooxaha Waa Wayn Oo La Ogaaday.
Maamulka kooxda Manchester City ayaa wali sugaya go’aanka rafcaankii ay u qaateen maxkamada xalinta khilaafaadka Sportska ee CAS kuwaas oo dheygsi kadib go’aan ka gaadhi doona haddii wax laga badalayo ganaaxii labada xili ciyaareed Man City looga mamnuucay Champions League.
Manchester City ayaa la filayaa in ay halis u gali karto saamaynta ganaaxa FIFA ku soo rogtay ee labada xili ciyaareed looga ganaaxay in ay ka soo muuqan karaan tartanka kooxaha Yurub ee Champions League.
Manchester City ayaa lagu helay danbi wax isdaba marin ah oo ay ku been abuureen xisaabaadka kooxdooda ee sanadihii la soo dhaafay taas oo la xaqiijiyay in ay jabiyeen sharciga dhaqaale wanaaga yurub.
Markii uu soo baxay ganaaxii labada xili ciyaareed ahaa ee ay FIFA ku xukuntay Manchester City waxaa markiiba bilawday wararka suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda Man City ugu muhiimsan lagula xidhiidhinayay kooxaha Yurub ugu waa wayn.
Laakiin wargayska Daily Mirror ayaa qoray in Manchester City ay aaminsan tahay in ay ciyaartoyda kooxdooda ugu muhiimsan sii haysa karaan labada xili ciyaareed ee Champions League laga ganaaxay.
Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Laporte, Sergio Aguero iyo xidigo magac wayn ku leh Manchester City ayaa haddaba suuqa kala iibsiga looga soo hadlayay iyada oo kooxo waa wayn lala xidhiidhinayay marka uu suuqu dib u furmo.
Maxkamada CAS ayayna u suurtogalin in ay qabto fadhigii lagu dhegaysan lahaa rafcaanka Manchester City sababtoo ah cudurka coronavirus, laakiin waxaa xukunka maxkamada la sugayaa inta ka horaysa bisha Agust ee bilawga xili ciyaareedka cusub.
Haddii ay Manchester City ku fashilanto rafcaanka ay u qaadatay maxkamada xalinta khilaafaadka Sportska ee CAS, waxaa markaas si rasmi ah u dhaqan gali doona ganaaxa labada xili ciyaareed ee soo socda laga saaray Champions League.
Laakiin Daily Mirror ayaa qoray in maamulka Man City ay hadda kalsooni ku qabaan in ay kooxdooda ku sii hayn karaan ciyaartoyda Etihad Stadium ugu muhiimsan xataa haddii ganaaxa lagu fuliyo.
Si kastaba ha ahaatee, Man City ayaa awooda oo dhan iskugu gayn doona koobabka Premier League, FA Cupka iyo EFL Cupka haddii go’aankii FIFA ee ganaaxa Champions League uu sidiisa u hirgalo.